Ikhaya » izithuba » Iindaba zoKhenketho » Kutheni uMphathiswa Wezempilo waseNigeria esithi hayi kuKhenketho lwezoNyango?
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseNigeria zokuhamba • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel
Kutheni uMphathiswa Wezempilo waseNigeria esithi hayi kuKhenketho lwezoNyango?
Umphathiswa Wezempilo wase-Nigeria u-Isaac Adewole ucel'umngeni koogqirha elizweni ukuba baphile ngokuhambelana nobizo lwabo kwaye bafumane iindlela zokudimazeka ukhenketho zonyango elizweni.
Umphathiswa uthe ngaphandle kokuba iingcali zaseNigeria ziphila ngokusebenza ekubuyiseleni imeko yezempilo kwicandelo lezempilo, imiceli mngeni ejongene nayo iya kuqhubeka ukuhlala ukuba amandla eengcali zempilo awabanjwa.
Inani labemi baseNigeria abashiya ilizwe ukuya kufuna unyango phesheya liyanda, kwaye oku kunefuthe le- $ 1.3 yezigidi ngendlela yelahleko yengeniso kuqoqosho lwaseNigeria.
Amashumi amawaka abantu baseNigeria bahamba minyaka le baya e-US, UK, India, Thailand, Turkey, France, Canada, Germany, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, nase China, phakathi kwamanye amazwe, ukuya kufuna unyango ngemicimbi yezonyango ukusukela ukufakelwa kwezintso , iintliziyo ezivulekileyo okanye ezenziwa ngentliziyo, ii-neurosurgeries, utyando lwezithambiso, utyando lwamathambo, utyando ngamehlo kunye nezinye iimeko zempilo, nditsho nokuhambisa iintsana.
Kwintetho yakhe, uSihlalo weKholeji yamaGqirha eNtshona Afrika, u-Abel Onunnu, uchaze ukufuduka kwabaqeqeshi bezempilo kwingingqi yeNtshona Afrika njengokhathazayo, esithi Urhulumente kufuneka afune indlela yokuyiphelisa.
Umphathiswa wenze le ngxelo kwinkomfa yonyaka yeekholeji zoogqirha zaseNtshona Afrika ezazibanjelwe eKaduna. Le nkomfa ibibanjelwe phantsi komxholo wokuphucula ukusebenza kwecandelo lezempilo, kwaye umsitho ububone iingcali kwezonyango zixoxa ngemiba echaphazela icandelo.